Ngaba Uzibiza ngokuba nguMdwebi okanye uMculi?
Ngaba uzibiza ngokuba ngumdwebi okanye umculi? U-MsWeezey ubonise ingxaki yabaninzi, ngakumbi abantu abangenzi ixesha elizeleyo baphila ngobugcisa babo: "Ndiyifumana nzima ukuthetha kumntu ukuba ndingumculi ngaphandle kwam ngasese kweso studio kwaye kungekhona ngoko umzekelo wohluphi phakathi komdwebi kunye nomculi na? Ngaba ngamnye umdwebi unokuthathwa njengomculi, kwaye ngamnye umculi ungumdwebi? "
Ingxaki ngokuzibiza ngokuba ngumdwebi kukuba abanye abantu baya kucinga ukuba uthetha umntu odweba izindonga. Ingxaki ngokuzibiza ngokuba ngumculi kukuba abanye abantu baya kucinga ukuba uyayinyamezela kwaye abanye baya kuba nexhala lokuba unobungozi (bakholelwa bonke abaculi bafana noVincent van Gogh ). Naluphi na ixesha osebenzisa ngalo uya kuhlangabezana nokungaqondi kakuhle, ngoko hamba nayo nayiphi na into oziva ukhululekile ngayo.
Ngexesha elinye ingxabano yayingenziwa ukuba umculi wayengumntu owadala ubugcisa obuhle obungabandakanyi nantoni na into eyayingabonwa njengezobugcisa. (Ukubiza imidwebo yomntu "ubugcisa bokuzilolonga" kwakunjalo ukuhlambalaza.) Le mihla isicatshulwa segama sisetyenziswe kuzo zonke iindidi zezinto zokudala, kuquka umculo kunye nomdaniso, kungekhona nje ubugcisa obuhle. Ngokuqinisekileyo ayithethi "umntu odala imifanekiso usebenzisa ipende".
Wonke umdwebi ungazijonga njengomculi, nangenye indlela, kodwa loo nto ayibenzi kakuhle okanye abanakho.
Yile yileyibhile, yimizobo yakho yokudweba ekugqibeleni. Okanye ngaba loo nto ingumsebenzi wakho?
Umbutho wezoKhenketho wehlabathi
Yiyiphi 'Inkunzi' kwiGalofu yeGalofu?